Mitompo tena fantatra ho meloka… | NewsMada
Par Taratra sur 08/09/2016
Tsy misy toy izao fitondrana izao hatramin’izay? Marina izany. Na izy ireo mpitondra, na ny vahoaka: samy milaza izany, na samy hafa aza izay lazaina. Eo ny mpitondra milaza tena fa tsy mbola misy nahavita ny vitany nandritra ny roa taona sy tapany tao anatin’izay antsasaky ny taonjato iray izay: 50 taona…
Eo ny asa lehibe sy maro imasoana, ny fanamby… Manginy fotsiny ny fitsinjovana lavitra izay atao amin’ny fiainam-bahoaka, ny fitiavan-tanindrazana, ny fampandrosoana, ny fakana lesona… Mby amin’ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fahamarinan-toerana politika …
Inona tokoa ny vita? Eo ny vahoaka mahita ny amin’izao fitondrana izao. Tsy inona fa izay iainany amin’ny fidangan’ny vidim-pianana, tsy fandriampahalemana, tsy fisian’ny asa vaovao miforona… Manginy fotsiny ny amin’ny tsy fahafahana maneho hevitra na manao fitakiana. Na miteny aza, tsy misy mihaino.
Misy antony matoa mipoipotra etsy sy eroa ny fampiakaram-peo sy ny karazam-pitokonana sy fitakiana tao anatin’izay roa taona sy tapany izay. Mpirakidraharaha fitsarana, sendikà, olona ifotony noho ny ady tany sy ny delestazy lava… Eo koa ny karazana fanambarana avy amin’ny mpitondra fivavahana, firaisamonina sivily…
Misy ny fangatahana fifampidinihana, fametraham-pialana, fifidianana mialoha ny fotoana, fidinana an-dalambe… Tsy manana ny marina avokoa ireny? Na manakorontana sy manongam-panjakana… Ny mpitondra ihany no hany marina sy manana ny marina… tsy misy toa azy tao anatin’izay 50 taona mahery izay.
Inona ny tena marina? Tsy fantatra intsony noho ny fitompoana teny fantatra. Nefa ny heloka ibabohana mody ho rariny, ary ny rariny itompoana mody ho heloka. Izay no maha hafa izao fitondrana izao: tsy manan-drariny noho ny tsy fibabohana amin’ny tsy mety atao, ary efa meloka rahateo noho ny tsy rariny tsy azo itompoana?